အာဏာသိမ်းတာ သူမ..မဟုတ်လို့ ပုံအဟောင်းလေး ပြန်တင်မိတာ “အပြစ်ဖြစ်သွားလား” လို့ ပရိတ်သတ်ကို ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ MRTV-4 သရုပ်ဆောင် ခြူးလေး – Maythadin
အာဏာသိမ်းတာ သူမ..မဟုတ်လို့ ပုံအဟောင်းလေး ပြန်တင်မိတာ “ေ-ာက်ပြစ်ဖြစ်သွားလား” လို့ ပရိတ်သတ်ကို ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ MRTV-4 သရုပ်ဆောင် ခြူးလေး..
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့ သူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ခြူးလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြူးလေးဟာ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကနေ တစ်ဆင့်
လူသိများလာတာ ဖြစ်ပြီးကျရာ ဇာတ်ကောင်ကို အကောင်းဆုံး ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင် တွေ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင် အမာ ရရှိလာတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ မကျေနပ်ချက်တွေကို ပေါက်ကွဲကာ အခုလိုပဲ ရေးတင်လာပါတယ်…” မသိရင် ငါက ဘဲ အာဏာ သိမ်းသွားသလိုလို …စစ်တပ် ကဘဲ ငါ့အမျိုး လိုလို နဲ့ ..ငါ post တင်ရင်ဘဲ တိုက်ပွဲက ရှုံးမလိုလို …ငါ post တင်ရင်ဘဲ သူတို့ အိမ်ကို..ပေါ်တာ လာဆွဲ ခံရတော့မလိုလို ..ငါက ဘဲ အခုချိန်မှာ အောင်မြင်ကြီးပွား ချမ်းသာပြီး…စီးပွားရေး တွေ ကောင်းနေသလိုလို
Facebook Game နဲ့ Tiktok တွေမှာ ပလူပျံနေ ကြတာကို အလှထိုင်ကြည့်နေပြီး ငါ အရင်က ပုံ အဟောင်း တင်တာ..ေ-ာက်ပစ် ဖြစ် သွားတယ်ပေါ့ ……” လို့ရေးသားလာပြန်တာကြောင့် ခြူးလေးရဲ့ post အောက်မှာ ပရိသတ်တွေက အပြင်းအထန်ဝေဖန် နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တခါတုန်းကလည်း “လက်လေးညောင်းယုံလောက် စာလေးတွေရေးပြီး လိုင်းပေါ်မှာ ပေါက်ကွဲပြတဲ့ လုပ်ရပ်ကိုရွေးချယ်မှ မှန်ကန်တယ် ထင်ရင်လည်း ထမင်းရှင်တွေရဲ့ အမုန်းကို ခံရမှာပါဘဲ ??? ” လို့ရေးသားခဲ့တာကြောင့် ပွဲဆူသွားခဲ့သေးပါတယ်နော် ။
Burma Cele Fan(crd)
အာဏာသိမ္းတာ သူမ..မဟုတ္လို႔ ပုံအေဟာင္းေလး ျပန္တင္မိတာ “ေ-ာက္ျပစ္ျဖစ္သြားလား” လို႔ ပရိတ္သတ္ကို ဒဲ့ေမးလိုက္တဲ့ MRTV-4 သ႐ုပ္ေဆာင္ ျခဴးေလး..
ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အၿပဳံးေလးေတြနဲ႕ ပရိသတ္ေတြ ရင္ထဲကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ သူေလးကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ျခဴးေလး ပဲျဖစ္ပါတယ္။ျခဴးေလးဟာ MRTV-4 ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြကေန တစ္ဆင့္
လူသိမ်ားလာတာ ျဖစ္ၿပီးက်ရာ ဇာတ္ေကာင္ကို အေကာင္းဆုံး ပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အခိုင္ အမာ ရရွိလာတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္လက္ ျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူေလး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက အခ်စ္ပိုေနရတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႕မွာေတာ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ေပါက္ကြဲကာ အခုလိုပဲ ေရးတင္လာပါတယ္…” မသိရင္ ငါက ဘဲ အာဏာ သိမ္းသြားသလိုလို …စစ္တပ္ ကဘဲ ငါ့အမ်ိဳး လိုလို နဲ႕ ..ငါ post တင္ရင္ဘဲ တိုက္ပြဲက ရႈံးမလိုလို …ငါ post တင္ရင္ဘဲ သူတို႔ အိမ္ကို..ေပၚတာ လာဆြဲ ခံရေတာ့မလိုလို ..ငါက ဘဲ အခုခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာၿပီး…စီးပြားေရး ေတြ ေကာင္းေနသလိုလို
Facebook Game နဲ႕ Tiktok ေတြမွာ ပလူပ်ံေန ၾကတာကို အလွထိုင္ၾကည့္ေနၿပီး ငါ အရင္က ပုံ အေဟာင္း တင္တာ..ေ-ာက္ပစ္ ျဖစ္ သြားတယ္ေပါ့ ……” လို႔ေရးသားလာျပန္တာေၾကာင့္ ျခဴးေလးရဲ႕ post ေအာက္မွာ ပရိသတ္ေတြက အျပင္းအထန္ေဝဖန္ ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အရင္တခါတုန္းကလည္း “လက္ေလးေညာင္းယုံေလာက္ စာေလးေတြေရးၿပီး လိုင္းေပၚမွာ ေပါက္ကြဲျပတဲ့ လုပ္ရပ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္မွ မွန္ကန္တယ္ ထင္ရင္လည္း ထမင္းရွင္ေတြရဲ႕ အမုန္းကို ခံရမွာပါဘဲ ??? ” လို႔ေရးသားခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲဆူသြားခဲ့ေသးပါတယ္ေနာ္ ။
ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့ “ဟဒယသပိတ်” တော်လှန်ရေးအငြိမ့် ကို သြဂုတ် ၁၄၊၁၅ရက်များတွင် ထုတ်လွင့်ပြသမည်။
မိခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်း (၁)လပြည့်လပတ်လည်အတွက် ဆွမ်းကပ်အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သွန်းသစ္စာဇော်